Ku saabsan - Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Bogga ugu weyn/About
Gargaarka Musiibada ee Musalafnimada waa isku-xirka masiibada masiibada ee ku saleysan mabaadi'da midnimada, gargaarka labada dhinac, iyo waxqabadka tooska ah ee madaxbannaan.
Qaab dhismeedka urur
Shabakadeena qaran waxay ka kooban tahay dad badan oo u ololeeya bey'ada, u dhaqdhaqaaqayaasha caddaaladda bulshada, u dhaqdhaqaaqayaasha caddaaladda adduunka, dhakhaatiirta waddooyinka, dhaqaatiirta dhirta, kuwa ku takhasusay dhaqamada, abaabulayaasha gargaarka labada dhinac, abaabulayaasha xorriyadda madow, abaabulayaasha bulshada, iyo kuwa kale oo si firfircoon u abaabulaya agagaarka taakuleynta dadka ka badbaaday musiibada ruuxa is caawinta iyo wadajirka. Waa shabakad baahsan oo ka jirta guud ahaan waxa loogu yeero Mareykanka, oo lagu qeexay dabeecadda iyo hal-abuurka bulshooyin fara badan isla markaana ay si wadajir ah isugu keeneen ballanqaadkeenna wadajirka ah si aan ugu istaagno midnimada kuwa ay saameeyeen musiibooyinku isla markaana u rogaya dhanka hirarka caddaaladda cimilada. Waxaan ku dhiseynaa shabakadeena wax barasho iyo ficil, anagoo ku qiimeyneyna go'aan wadareed iyo ismaamul. Waxaan si qoto dheer u dareensan nahay barnaamijyada badbaadada Black Panther oo ujeedka u ahaa qancinta baahiyaha degdegga ah isla markaana isla mar ahaantaana kor u qaadnay miyirka dadka. Waxaan sare uqaadeynaa oo aan taageereynaa dadaalada bulshada safka hore ee hogaamineysa dib u soo kabashadooda kadib xilliyada dhibaatooyinka muuqda, iyo masiibooyinka aan muuqan, ee joogtada ah ee hantiwadaaga, gumeysiga, soo saarista kheyraadka, rabshadaha jinsiga, iyo sarreynta cad ee noocyada kale ee xukunka. Anagoo ku xidhnayna taariikhdeena iyo waaya aragnimadeena abaabulka dhaqdhaqaaqa bulshada waxaan aragnaa shaqadeena gargaarka masiibada ee halganka bulshada waxaanan aaminsanahay inay tahay inaan si isku mid ah wax uga qabano baahiyaha is-go'aaminta degdegga ah ee dadka ee badbaadada iyo abaabulida isbeddelada aasaasiga ah ee habka aan iskula xiriirno iyo dhulka.
Ka soo baxa abuurka madax-bannaanida, madax-bannaanida, caddaaladda adduunka, iyo dhaqdhaqaaqyada dhaqdhaqaaqa, af-hayeenku waa hay'adda abaabulka weyn ee Gargaarka Musiibada. Sidoo kale loo yaqaan "dhammaan gacmaha", "isu imaatinka guud", ama "goobaabin guud", kaqeybgalayaashu waxay u shaqeeyaan si iskaashi iyo isdabajoog ah si ay ugu dhaqaaqaan Gargaarka Musiibada Gargaarka Mutual una dhowaadaan gaaritaanka himiladeeda iyo himilooyinkeeda. Waxay kuxirantahay cabirka iyo awooda, ama dhamaan dadka kuxiran abaabulka socda, ama kaliya wufuud ka socota kooxaha isku xirnaanta iyo kooxaha shaqeynta, isku duba ridka iyo iskaashiga wadaagida wixii cusbooneysiin ah, sameynta go'aamada saameynaya Gargaarka Musiibada Gargaarka guud ahaan, deji jihada guud ee ka qayb qaadashada dhammaan dadka ku lugta leh, iyo gacan ka geysashada isku-duwidda howlaha u dhexeeya kooxaha isku xidhan iyo kooxaha shaqeeya. Markii aan raadineynay is afgarad / ogolaansho, halkii aan isweydiin lahayn, "miyaan ku raacsanahay tan 100%?" su'aasha hawlgalka ah "Miyaan la noolaan karaa tan?" Qaabkan, oo ay weheliso dhaqankeenna ah ku-wareejinta go'aan gaarista illaa heerka ugu macquulsan, ayaa yareysa isku dhaca waxayna kobcineysaa jawi ku habboon wadaagga wadaagga awoodda go'aan-qaadashada iyo ixtiraamka ficilka madax-bannaanida.
Guddiga hogaaminta ayaa ka kooban koox firfircoon oo qiyaastii tobaneeyo shaqsiyaad ah oo ka kala yimid daafaha dalka. Qaar badan oo ka mid ah xubnaha Guddiga Istaraatiijiyadda ayaa ku hawlanaa mashruucyo gurmad deg deg ah oo wada jir ah oo ay ka mid yihiin Common Ground iyo Occupy Sandy. Xubnaha guddiga hogaaminta ayaa wacyigeliya, abaabul, abaabulaya taageerista mashruucyada gurmadka Musiibada ee Mutual Aid ee beelkooda, gobolada iyo shabakadaha. Iyaga oo la shaqeynaya taabasho fudud, waxay bixiyaan Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid oo leh joogtaynta hay'ad muddada fog ah iyo joogtaynta, ka shaqeynta sidii loo dhisi lahaa hoggaanka ka dhex jira shabakadda qaran, iyo in ay si dhow ula shaqeeyaan kooxaha ka shaqeeya gargaarka musiibada ee Mutual Aid, kooxaha isku xirnaanta, iyo af hayeenka si loo hubiyo sii wadidda ololaha, baahiyaha, iyo geedi socodyada Gargaarka Musiibada ee Labada Dhinac.
Kooxo shaqo oo iskood u madaxbannaan ayaa ka dhex jira shabakadda Isku-xidhka Musiibada ee Gargaarka Mashiinka si ay gacan uga geystaan ​​sidii loo dhaqaajin lahaa qaybo ka mid ah howlaheena. Qaar ka mid ah kooxaha shaqeeya waa ku meelgaar waxaana lagu sameeyay baahiyo gaar ah sida abaabul gaar ah oo goob ama koox is bahaysi ah inta lagu jiro musiibo gaar ah. Kooxaha kale ee shaqeeya ayaa ah kuwa sii joogto ah, sida caafimaadka / ladnaanta, warbaahinta / isgaarsiinta, iyo la xisaabtanka maaliyadeed. Kooxaha shaqeeya waxay ku wada xiriiraan wicitaanada shir, emayl, liisaska adeega, calaamadaha, iyo / ama dhulka waxayna yihiin hal meel oo lagu gaari karo halka qofwalboo ka mid ah shabakadda uu si weyn uga qeyb qaadan karo qaabeynta jiheynta Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid. Si aad uga qeybgashid koox shaqo, ama aad bilowdo mid cusub, nala soo xiriir at [emailka waa la ilaaliyay] Intaas waxaa sii dheer, waxaan aaminsanahay furfurnaan, baahin baahin, horudhac, iyo in go'aamada iyo ficillada ugu waxtarka badan ay ka dhacaan heerka kuwa ugu dhow dhibaatada ama inta badan ay saameyn ku yeeshaan xalka. Sidaa darteed, markasta oo ay suurta gasho, waxaan si xoog leh u dhiirigelineynaa sameynta kooxo isku xirnaan oo ilaalin kara is-abaabulkooda iyo madax-bannaanidooda, isla mar ahaantaana isku xirka iyo ka shaqeynta abaabulka gargaarka degdegga ah ee ka dhaxaysa Musiibada.
Subaxnimadii hore ee Sebtember 19, 1985, dhulgariir weyn ayaa ku dhuftay xeebta Badweynta Baasifigga ee Michoacán. Mexico City way burbursanayd. Ugu yaraan 5,000 oo qof ayaa naftooda ku waayey. 800,000 oo qof ayaa laga dhigay hoy la’aan. Markii askarta iyo booliisku ay si weyn u garab taagnaayeen, derisku midba midka kale wuu quudinayay oo is magan geliyay, wuxuu sameeyay shaqaale nadiifin iyo guuto gurmad ah. Kuwani brigadistas, sidii loogu yeeri jiray, waxay dadka ka qodeen burburka ardaydana la dhigay cagaf cagafyada hortooda si baadigoobka dadka ka badbaaday uu u sii socdo. Damnificados, sida loogu yeeray dadka cusub ee guri la'aantu ku dhacday, waxay ku guuleysteen xuquuqda guriyeynta. Khaanadaha dharka, ka dib markay arkeen milkiileyaasha badbaadinta mashiinnada dadka hortooda, waxay bilaabeen urur haween, dadku waxay si wada jir ah u abaabuleen shirar caan ah. Khibradahaas waxay keeneen dad badan inay su’aal ka keenaan sababta ay ugu baahan yihiin dowlad dhexe oo aan dan ka lahayn ladnaanta ama badbaadada dadkeeda. Fahamkan, bulshada rayidka ah ee Mexico ayaa lagu baraarugay. Bishii Sebtember 11th, 2001, laba diyaaradood ayaa ku dhacay Xarunta Ganacsiga Adduunka. Mid kalena wuxuu ku dhacay Pentagon. Diyaarad afaraad ayaa ku dhacday magaalada Shanksville, Pennsylvania ka dib markii ay isku dhaceen rakaabka iyo afduubayaasha. Waxa dadka intiisa badani ka ogyihiin wixii ka dambeeyay 9/11 waa taariikhda dadka aqoonta sare leh: yareynta xorriyadaha madaniga ah, dagaalka Afgaanistaan ​​(iyo markii dambe Ciraaq), cadaadiskii lala beegsaday Muslimiinta iyo Carabta ee Gobolka iyo kuwa kale. Laakiin magaalada New York waxay soo martay khibrad taa ka duwan. Si la mid ah geesinimada gaarka ah ee dadkii saarnaa diyaaradii 4-aad, dadka ku jira labada munaaradood ee mataanaha ah iyo meelaha ku hareeraysan waxay iska caawiyeen midba midka kale amniga. Dadka lugeynaya ayaa hagayay taraafikada isgoys walba si ay ambalaasyada u gaaraan dhaawacyada. Jikooyinka impromptu ayaa meel walba ka soo muuqday. Dadka caadiga ah waxay xadaan doonyaha si ay uga badbaadiyaan kuwa kale burburka iyo qiiqa dhacaya. Dadku waxay si ku-meel-gaadh ah amar ugu siiyeen qalcad si ay u noqdaan xarun baahsan oo aan baahsanayn iyo xarun dhexe oo tabaruc ah. In kabadan kun qofna waxay ku bixiyeen tabaruc inay lasocdaan dumarka muslimiinta ah ee xijaaban kuwaas oo dareemay inay amaan ku dhex socon lahayeen dadweynaha. Erayada fanaaniinta hip-hop Jay Z iyo Alicia Keys, waxay ahayd "hawd la taaban karo oo riyadu ka samaysan tahay".
Ogosto 29th, 2005, Duufaantii Katrina waxay ku dhufatay Xeebta Gacanka. In ka badan 1,800 oo qof ayaa naftooda ku waayey. Jawiga apocalyptic-ka ee New Orleans, dhawr maalmood ka dib Duufaantii Katrina, halkan iyo halkaas, noloshu dib bay isu abaabushay. Marka laga hadlayo waxqabad la'aanta mas'uuliyiinta dadweynaha, oo aad ugu mashquulsanaa nadiifinta aagagga dalxiiska ee Xaafadda Faransiiska, ilaalinta dukaamada, iyo ka jawaab celinta qoryaha otomaatigga ah ee dalbashada caawimaadda dadka saboolka ah ee magaalada deggan, qaabab midaysan oo bulshada la ilaaway ayaa dib loo abuuray. . In kasta oo mararka qaar la iskudayo xoog-hubeysan oo lagu doonayo in lagu faarujiyo aagga, in kasta oo ay jiraan kooxo xag-jirnimo caddaan ah oo ugaarsanaya oo dilaya xubnaha bulshada madow ee aan hubeysnayn, dad badan ayaa diiday in ay ka baxaan magaalada. Kuwa diiday in loo masaafuriyo sida "qaxootiga deegaanka" wadanka oo dhan, iyo kuwa ka yimid hareeraha si ay ugu soo biiraan midnimo, iyagoo ka jawaabaya wicitaan ka yimid Malik Rahim, oo hore u ahaa Black Panther, is-abaabul ayaa ku soo noqday hore. Malik Rahim, Scott Crow, iyo kuwa kale oo hore wada sheekaysanayaal ah ayaa midba midka kale ka cusbooneysiiyaa shaqada midnimada maxaabiista siyaasadeed, iyagoo taageeraya Angola 3: Robert King Wilkerson, Albert Woodfox iyo Herman Wallace. Si wada jir ah ayey u aasaaseen Ground Common.
Muddo toddobaadyo ah gudahood, dhakhaatiirta caafimaadka ee mutadawiciinta ah ee loogu magac daray shaqadooda oo ah bixiyeyaasha caafimaad ee ugu horreeya ee mudaharaadyada, ayaa sameeyay Xarunta Caafimaadka Guud. Laga soo bilaabo maalmihii ugu horreeyay, rugtani waxay bixisay daaweyn bilaash ah oo wax ku ool ah, oo ay ku jiraan dhammaystiran, beddelaad, iyo daawo reer galbeed ah oo loogu talagalay kuwii u baahnaa, iyada oo ay ugu wacan tahay qulqulka joogtada ah ee mutadawiciinta. Rugta caafimaadka, guriga Malik, iyo goobaha kale ee aasaasiga ah ee loo yaqaan 'Common Ground sites' sida guryaha iskaa wax u qabso ee kuwa u yimid nadiifinta iyo dib u dhiska guryaha daadadku waxay noqdeen saldhigyo iska caabin maalin kasta ah hawlgalka nadiifinta ee cagafcagafyada dawladda, kuwaas oo isku dayayey inay u rogaan qaybo ka mid ah magaalada u noqon doonta daaq u ah kuwa guryaha dhisa. Dadku waxay ka yimaadeen cadaaladda adduunka, dagaalka ka soo horjeedka, fowdada, iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo ka badbaaday xakamaynta gobolka ee mucaaradka. Shakhsiyaadka ka socda Bambooyinka Aan Cunnada Ahayn, Indymedia, Halyeeyadii Nabadda, Daawooyinka waddooyinka iyo ururinta xuquuqda guryaha, dhammaantood waxay ku midoobeen inay samaystaan ​​jikooyin caan ah, bixiyaan daryeel caafimaad oo bilaash ah, ka qayb qaadashada dhismeyaasha dhismaha si looga hortago burburkooda, iyo inbadan. In kasta oo uu joogo ugu yaraan hal wakiilka misogynistic provocateur, Common Ground waxay abuurtay xarumo caafimaad oo dheeri ah, xarun caafimaad, waxay dhistay beero beel, waxay maamushay hoyga haweenka, waxay qaybisay kaalmo, waxay sameysay maktabad qalab amaah lagu siinayo iyo idaacad, guryaha daadsan, nadiifinta qashinka, diiwaangelinta xadgudubyada booliska, waxay abuurtay xarumaha warbaahinta bulshada, bio-remediated carrada, iyo dib u beeray dhirta qoyan si ay u dhisaan caqabad ka hor duufaanka soo socda. Diyaargarowga dadka ee ficilka tooska ah waxay heleen xaalad cusub oo ku saabsan difaaca guryaha dadweynaha, dib u furida albaabada iskuulka ee xiran, gaarsiinta agabyada aadka loogu baahan yahay ee isbaarooyinka la soo dhaafay, iyo ka caawinta xubnaha bulshada inay ilaashadaan xarumahooda taariikhiga ah ee cibaadada inkasta oo ay jiraan mucaarad. Khibrada iyo caqliga laga kasbaday abaabul wadareedkii ka dhanka ahaa caalamiyeynta oo lagu dhaxlay dhaxalka barnaamijyadii badbaadada Black Panther. Aqoontan wax ku oolka ah ee la uruuriyay inta lagu gudajiray dhowr nolol oo dhaq dhaqaaqa bulshada dhamaantood waxay heleen meel banaan oo la geyn karo. Burburkii New Orleans ee Hurricane Katrina waxay siisay dhaqdhaqaaqyo xorayn iyo kuwa kale oo u heellan is-beddelka bulshada fursad ay ku gaaraan isku-xirnaan iyo midnimo aan looga baran oo ka gudubtay daalkii hore ee daalay ee ku saleysnaa fikirka ama xeeladaha. Jikada Street waxay u baahan tahay in horay loo sii diyaariyo qodobo; gargaarka caafimaadka degdegga ah wuxuu u baahan yahay helitaanka aqoonta lagama maarmaanka ah iyo agabka, sidoo kale sameynta raadiyeyaasha burcad-badeedda. Taajirnimada siyaasadeed ee waaya-aragnimada noocan oo kale ah waxaa lagu xaqiijiyaa farxadda ay ka kooban yihiin, sida ay uga gudbaan xatooyada shakhsiga ah, iyo muujinta xaqiiqda la taaban karo ee ka baxsan jawiga maalinlaha ah ee nidaamka iyo shaqada Qofkii ogaa farxadda bilaa lacagta ah ee xaafadahaan New Orleans ka hor musiibada , diidmadooda ku aaddan gobolka iyo dhaqanka baahsan ee lagu sameeyo waxa la heli karo sinaba ugama yaabi doono waxa halkaas ku suurta galay. Dhinaca kale, qof kasta oo ku xayiran nolol maalmeedka dhiig la'aanta iyo atomiga ee saxarahayaga aan degan nahay ayaa shaki gelin kara in go'aanka noocaas ah laga heli karo meel kasta oo dambe. Common Ground ma ahayn utopia firfircoon. In kasta oo tababaro ladagaalanka dulmiga iyo iskudayyo kale oo xadidan oo lagu joojinayo dhaqanka dulmiga ah, cunsuriyada iyo jinsiga ayaa wali lajoojiyay Intaas waxaa sii dheer, mid ka mid ah hogaamiyeyaashii hore ee Common Ground, Brandon Darby, oo markii dambe la cadeeyay inuu yahay FBI-da warfaafinta iyo wakiilka daandaansiga, wuxuu u adeegsaday booskiisa hogaaminta si uu uga faa'iideysto haweenka da 'yarta ah, wuxuuna dad badan ku kala fogeeyay dabeecad xumadiisa, iyo dhaqanka kale ee dulmiga ah. Markii tabaruceyaashu ku adkeysteen in dhaqankan dhibaatada leh wax laga qabto, dadkaas halkii laga ahaan lahaa dambiilaha ayaa laga saaray ururka.
Dhibaatooyinka sidoo kale waxay ka sii fogaadeen hal shaqsi. Si la mid ah sida ku jirta raasamaalnimada musiibada, kuwa dhaqaalaha haysta waxay ka faa'iideystaan ​​xaaladda si ay u sii xoojiyaan mudnaantooda iyo awooddooda una soo bandhigaan dib-u-habeyn dhaqaale oo neoliberal ah, aabbayaal musiibo, oo si buuxda loogu soo bandhigay dhulka guud, dareenka dhibaatada iyo deg-degga ayaa looga faa'iideystay ee dadka u isticmaalay cudurdaar inay ka gudbaan mabaadi'dooda danaha. Kala soocida shaqada adag ee joogtada ah, jawiga dhibaatada, culeyska xagjirnimada, yareynta ama hoos u dhigida shucuurta iyo baahiyaha aasaasiga ah ee aadanaha - kuwani dhammaantood waxay ahaayeen calamado guduudan oo rinjiyeeyay dhaqan abaabul sun ah oo aan waaraynin oo aan si habboon looga hadlin. Waxay ubaahantahay wacyigelin isdaba-joog ah oo abaabul ah iyo rabitaan ah in si xeel dheer loo muujiyo si aan dib ugu dhicin dabinka aabanimada, gumeystaha, ama qaababka kale ee dulmiga leh ee dadaalka abaabulka. Tusaalayaashan Gundhiga Wadajirka ah ee aan lajaanqaadin himilooyinkiisa waa inaan laga weyneyn ama la iska indhatirin. Xaqiiqdii, waxay muhiim u yihiin aqoonsiga iyo wax ka barashada. Isla mar ahaantaana, ma tirtirto waxqabadka halista ah ee gar-gaarka musiibo ee aasaaska u ah aasaaska guud. Had iyo jeer maahan arrin muujineysa in muujinta awooda kala saraynta ay ka soo ifbaxeyso dhaqdhaqaaqyadeena bulshada iyo ururada, laakiin goorma. Markay taasi dhacdo, waa muhiim in loogu magac daro waxa ay tahay, iyo in awooddan loo tartamo, laga soo horjeedo, oo nafaqeeya wax cusub oo meeshiisa ku koraya.
Intaa waxaa sii dheer, Brandon Darby wuxuu si cad uga mid ahaa nooca casriga ah ee 'COINTELPRO', isla xoogaggii sirdoonka ee ka soo horjeeday ee soo dhex galay oo sababay dhimashada iyo xarigga dad badan oo la socday Black Panthers, Dhaqdhaqaaqa Hindida Mareykanka, iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo loogu talagalay xoreynta wadajirka ah. Saldhigga guud waxaa loo maleyn karaa inuu yahay urur dhexdhexaadin ah oo isku xiraya qaabka abaabulka kacaanka ee Black Panthers iyo hogaaminta baahsan ama jiifka ah ee Shaqada Sandy. Seddexduba si siman uma wadaagin awooda go'aan qaadashada ururadooda, laakiin sedexdoodaba waxay awooda la wadaageen beelihii ay taageersanaayeen, dhageysanayeen, weydiinayeen, ugana jawaabayeen baahida dadka, iyagoo cadeeyay taageerada isbadalka bulshada ee xagjirka ah. Si la mid ah wixii ka dhacay toban sano iyo badh horaantii Mexico, duufaantii Katrina ka dib, bulshada rayidka ah ayaa lagu baraarugay. Rapper Kanye West ayaa si caan ah uga baxay qoraal aan caadi aheyn oo lacag ururin uruurin ah isagoo leh, "George Bush dan kama lihi dadka madow". Laakiin wixii dhaafsiisan hal shaqsi, guud ahaan xagjirnimada caddaanka ah, dowlad-dege-gumeysi dan kama lihi dadka madow, ama dadka asaliga ah, dadka saboolka ah, dadka naafada ah, dadka LGBTQ, dadka la kulma hoy la'aanta, ama qof kasta oo ka baxsan diintooda Awoodda iyo Damaca Waxay bilaabatay inay ku waabariiso dad badan oo badan oo ku nool New Orleans iyo inta la yiraahdo Mareykanka oo dhan in dowladda aysan dan ka lahayn. Hadana, hadaan nahay dadka, waa inaan is caawino.
Dad badan oo kaqeyb qaatay taakuleyntii wadajirka ahayd kadib duufaantii Katrina waxay markale xooga saartay dhisida dhaqdhaqaaqyo kale sida Dhaqdhaqaaqa Isbahaysiga Caalamiga ah, Maya Mas Muertes, Cunno Aan Bambooyin ahayn, Dunida Koowaad! Rising Tide, Shabakada Waxqabadka Roobka Kaymaha, Caddaaladda Buuraha, Wadajirka Beehive, maxaa noqday Dhaqdhaqaaqa Shaqada iyo kuwa kale oo aan tiro lahayn. Laakiin helitaanka midba midka kale adoo si toos ah ula shaqeynaya oo lala kaashanayo dadka ay saameeyeen si loo gaaro badbaadadooda iyo baahiyaha kale, ka sokow ina siinaya dareen sare oo awood gudaha ah iyo mala awaal bacrimin ah, ayaa sidoo kale dhistay xiriiro ka badbaaday sannadihii. Bishii Janaayo 12, 2010, dhulgariir ba'an ayaa ku dhuftay Haiti, oo sababay ugu yaraan 100,000 oo dhimasho. Dadka qaar ayaa si kumeelgaar ah ula xiriiray magaca Mutual Aid Musiibada Relief ee Haiti waxayna u direen dhowr koox Haiti oo bixiya daryeel caafimaad, sahay iyo gargaar.
Inbadan oo naga mid ah ayaa gacan ka geysanay xirida Wall Street, sikastaba ha noqotee si kooban, oo qeyb ka ah Dhaqdhaqaaqa Shaqada iyo kaqeybqaadashada xeryaha deegaanka. Occupy Wall Street waxay ka bilaabatay New York's Zuccotti Park sanadkii 2011, halkaasoo tiro mudaaharaadayaal ah ay ku dhaqaaqeen ficil toos ah oo aan xasilooneyn si ay u xiraan Wall Street isla markaana uga wacyi galiyaan arrimaha ku saabsan cadaalad darada dhaqaale iyo sinaan la’aanta. Shaqada Sandy waxay ka soo kortay Occupy, sanadka soo socda, si ay u siiso gargaar wada jir ah bulshooyinka ay saameeyeen Sanders-ka Sandy. Shaqada Sandy barnaamijyadeeda waxaa ka mid ahaa caawimaad caafimaad, dhisme, maktabad qalab amaah, qalab iska saarid, qaadista caaryada, cuntada bilaashka ah, qeybinta gargaarka, caawimaad sharci oo bilaash ah, dukaan lacag la’aan ah, adeegyo waxbarasho, iyo inbadan. Abaabul yar oo baahin wada jir ah oo kusaabsan gargaarka masiibooyinka ayaa ka dhacay Oklahoma (OpOK), iyo Colorado (Boulder Flood Relief). Tusaalayaashu waa tiro badan yihiin oo cad yihiin: iscaawinta iyo wadajirka ayaa aad uga waxtar badan uguna waxtar badan marka loo eego hababka xagga hoose ee masiibooyinka. Xitaa Department of Homeland Security, caadiyan si kadis ah uga soo horjeedda shaqada fowdada, madax-diidayaasha, hanti-wadayaasha, iyo kuwa kale ee ku riyooda adduun ka wanaagsan, ayaa qiraya waxtarka sare ee qaabkan jiifka ah, baahsan, shabakadda marka loo eego kan ugu hooseeya ee taliska iyo xakamaynta mid. Sannadkii 2015-kii, 10-guuradii ka soo wareegtay Duufaantii Katrina, Wadajirka Guud ee Wadajirka ah waxay ku kulmeen guriga Malik ee ku yaal Algiers, xilligaas oo dadku ay ka tarjumayeen quruxda, xanuunka wadnaha, iyo murugada khibrada guud ee dhulka. Adduunkii ugu fiicnaa ee aan ognahay inay suurtagal tahay oo aan isku daynay inaan ka caawinno umulisada magaalada New Orleans ka dib markii Katrina ay umuuqatay inay weli dhalatay.
Gargaarka naafada ah ee masiibada waa qaab xagjir ah oo loogu talagalay gargaarka musiibada iyo abaabulka dhaqdhaqaaqa bulshada. Waa urur, shabakad, tab iyo dhaqdhaqaaq. Gargaarka Musiibada Caawinta, wadajirka / ururada / shabakadda, wuxuu ku bilaabmay xilligan xaadirka ah ee 2016, markii dhowr halyeey oo ka mid ah abaabulkii gargaarka musiibada ee la soo dhaafay ay isu yimaadeen oo ay aasaaska u dhigeen shabakad joogto ah oo wax ka qabata musiibooyinka, xagga hoose.
Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid wuxuu qirayaa guul darrooyinka dhaqdhaqaaqa gargaar ku saleysan midnimo ee la soo dhaafay wuxuuna doonayaa inuu wax ka barto qaladaadkaas, ku dhiso casharrada laga bartay tobannaan sano ee jawaabta musiibada ee ay hoggaamiso bulshada oo aan ka qaadanno dhiirrigelinta, iyo inaan hubino in dhaqanka ugu wanaagsan, xiriirka , iyo ilo ayaa diyaar u ah in la geeyo si ay u taageeraan bulshooyinka ay saameeyeen masiibooyinka mustaqbalka. Tan iyo waagaas, Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid wuxuu sii waday dhaxalka madax-bannaanida, baahinta, iyo gargaarka masiibooyinka xorriyadda iyadoo laga jawaabayo daadadka taariikhiga ah ee Baton Rouge, daadadka West Virginia, Duufaannada ka socda koonfur-bari Mareykanka iyo xeebta gacanka, duufaannada ka dhaca Tennessee, Istaagga Rock, Duufaannada Irma iyo Maria ee Puerto Rico, dabka West Coast, cudurka faafa ee coronavirus, iyo inbadan oo ah - dhisida xarumo fayoqabka, bixinta daawo nafta lagu badbaadinayo, qashin nadiifinta, daadinta guryaha daadadka, saadka loo qeybiyo, qeybinta waji-furka iyo qalabyada kale ee ilaalinta, ka caawinta waarta dib-u-dhiska dadaallada iyada oo loo marayo nadiifinta biyaha iyo kaabayaasha qorraxda, saqafyada kore, u doodista maxaabiista xiran, kordhinta dadaallada gargaarka ee wadaagga ah ee xoraynta, ku lug lahaanshaha ficil toos ah, iyo hawlo badan oo dheeri ah oo lagu taageerayo badbaadada dadka, awoodsiinta, iyo is-go'aaminta. Halkii laga beddeli lahaa ama la beddeli lahaa muuqaalada iskaa wax u qabso ee iskaashiga ah, Is-kaashatada Gargaarka Musiibada ee Wada-hawlgalayaashu waxay la shaqeeyaan oo taageeraan astaamaha deg-degga ah ee is-kaashiga iyo kor u qaadista dadaallada bulshooyinka safka hore ee horkacaya dib-u-soo-kabashada iyaga ka dib xilliyada dhibaatooyinka muuqda, iyo waxa muuqda, socda aafooyinka hanti-wadaaga, gumaysiga, soo saarista kheyraadka, rabshadaha jinsiga, sarraynta caddaanka, iyo kartida, iyo noocyada kale ee xukun. Waxaa dhiirrigeliyay Paulo Freire's Pedagogy of the cadaadiyay iyo Ololaha kale ee Zapatista, ee 2018, waxaan soo dhex marnay kala duwanaansho kala duwan, oo waxaan wax badan ka baranay waxa ay tahay is-caawinta, iyo masiibooyinka u kala duwan duufaannada, duufaanta, iyo shilalka kiimikada ee dhuumaha, caddaanka-sarreynta , iyo mudane.
Safarkan waxbarasho ee caanka ah, waxaan ku nuuxnuuxsanay iskaashiga iyo aayo-ka-tashiga, halkii aan ka sugi lahayn caawimaad si ay uga soo boodaan kor. Aqoon-isweydaarsiyadeennu waxay ku bilaabeen iyagoo qiraya aafooyinka in ka badan aafooyinka ba'an ee fowdada cimilada ama dillaaca lama filaanka ah ee kaabayaasha. Waxaan ku nool nahay aafooyinka gumaysiga iyo hanti-wadaagga maalin kasta, waana aafooyinkaas nidaamsan ee aan waqtigeenna ku bixino ka jawaab celinta ka dib markii ay qabowgu qaboobeen ama ay biyuhu nadiif noqdaan. Wareegyada dabiiciga ee dhulka ma ahan dhibaatada. Musiibadu waa habka ay hay'adaha uga faa'iideystaan ​​ugana abuuraan sinnaan la'aan. Waa qaabdhismeedka awoodda ee kali ku ah gargaarka, laakiin diidaya inuu u qaybiyo kuwa aadka ugu baahan. Markii aan ku qeexeyno "musiibo" qaabkan, waxaan saarnay shabaq ballaadhan, waxaan la kulannay bulshooyin leh heerar kala duwan oo diyaargarow ah, waxaanna maareynay saadka habka isgoyska ee abaabulka kaas oo wax ka baranaya wixii la soo dhaafay isla markaana dhisi doona barnaamijyo badbaado mustaqbalka. Waxaan waqti badan la qaadanay asxaabteena cusub oo aan kawada hadalnay rajada iyo cabsida, shaqada wadajirka ah ee murugada, iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in horay loogu socdo xawaaraha kalsoonida - in la abuuro wada shaqeyn daryeel halkii laga ahaan lahaa dhaqan gubasho. Mawduuc weyn oo aan wadaagnay wuxuu ahaa "geesinimadeenu waa awooddeena." Waxaan si joogto ah u sifeynay nuxurka iyo sheekada casharradeena si aan uga xanaajinno sixir badan wadahadalladeena. Kooxdayada saaxiibtinimada leh waxay is taageereen si ay u gaaraan go'aano deg deg ah, qorshaynta saadka, farsamooyinka dhajinta Instagram, wadida masaafada dheer, iyo maaraynta lacagaha, dhammaantood iyagoo midba midka kale siinayo jawaab celin wax ku ool ah iyo sameynta waqti mararka qaarkood si loo joojiyo dabiiciga. Shaqadani waa mid culus, laakiin, waxaan ku soo biirnay dalxiis wadnaha oo dhan, iyo, markii aan soo safarnay kumanaan mayl, waxaa naloogu soo buuxiyay daryeel aad u badan iyo dhiirigelin ay naga heleen dadkii nagu casuumay beeshooda.
Isku soo wada duuboo, dhamaanteen waxaan markhaati ka nahay dhibaatooyinka xasilloonida, la'aanta guryo la awoodi karo, baabi'inta kaabayaasha dadweynaha, dhaqdhaqaaq dhaqameed cad, iyo bay'ad sun ah oo sii kordheysa. Dad badan oo aan lahadalnay, waxay si lamid ah goobjoog u ahaadeen in Gobolku ku guuldareystay inuu ka jawaabo musiibooyinkii degdegga ahaa, waxayna sidoo kale raadinayeen habab si toos ah wax looga qabto. In kasta oo jawi cabsi badani jiro, haddana waxaannu helnay dad u diyaarinaya bulshadooda wax ka qabashada musiibooyinka ba'an iyada oo la abaabulayo dadaallada is-caawinta ee doonaya in si wada jir ah wax looga qabto kuwa socda, sidoo kale. Socdaalkeenii ka dib markuu istaagay, jaaliyadaha qaar waxay sii wadeen kulankoodii ku saabsanaa mowduuca u diyaar garowga inay ku dhisaan tababaro horay u jiray, wadaagid kheyraad, iyo xiriiro midnimo ka hor dhibaatada.
Dhinacyo badan marka laga eego, waxay umuuqatay inaan lumineyno dhulkeena. Waxaa naloo sheegay inay goori goor tahay; insaanimada la iska ilaaway. Waxaan daawannay daruuro madow oo dul hoganaya bulshooyinka. Laakiin, socdaalkii waxaan kula kulanay qabanqaabiyaal aan tiro lahayn oo horay u socday si ay ula kulmaan beddelka dhalaalaya ee ay qiyaasayeen. Mid ka mid ah qeybihii ugu wanaagsanaa safarkii waxbarasho ee caanka ahaa wuxuu ahaa maqalka dadka oo mahadnaq u muujinaya fursadayada istaagitaankeena aan u furanay inaan kulanoqno dadka gobolada oo dhan isla markaana aan isla helno meel yar oo midba midka kale ah si aan ugala hadalno riyooyinki habeenki hurdada ka kicinayay, iyo riyooyin iyaga sii haya. Waxaan la kulannay caqabado cabsi badan, laakiin waxaan u adkaysanay oo aan si wada jir ah uga shaqeynay si aan u helno xalal taas oo qayb weyn ka ah qof kasta oo quudin jiray, dejiyay, oo na daryeeli jiray safaradaas baaxada leh. Waxay ahayd waayo-aragnimo awood leh in si ula kac ah loogu xiro shabakadeena. Waxaan si qotodheer ula xiriirnay xiriirkii jiray, waxaan bilownay inaan abuurno fursado cusub oo xiiso leh, waxaanan saameyn wax ku ool ah ku yeelanay mashaariicda maxalliga ah sidoo kale, annagoo ka faa'iideysanayna kheyraadkeenna iyo waqtigeenna firaaqada ah inaan ku qaadno dhismayaasha guryaha xerada xayiraadda dhuumaha ee Minnesota, si aan oday dhaqameed uga soo qaadno baahida dayactirka guriga ee New Orleans, iyo in la siiyo xirmooyinka dawada bilowga ah Kooxda Waxqabadka ee Wolfpack Gunshot ee Cleveland. Waxaan sidoo kale caawinnay Bixiyeyaasha Biyaha ee la dagaalamaya Bayou Bridge Pipeline at L'eau Est La Vie Camp ee Louisiana, waxaanan la soo baxnay dadka degan Flint oo muujinaya mudaaharaad ka dhan ah xiritaanka gobolka ee qaybinta biyaha dhalada ah ee bilaashka ah iyada oo Nestle loo ogolaaday inay laba jibaarto xatooyada khayraadka biyaha ee Michigan. Ku xirnaanshaha tilmaamaha noocan oo kale ah, ee lagu aasay sanadihii nolosha caadiga ahayd, waa dariiqa kaliya ee suurtagal ah ee aan la sii liidan adduunka iyadoo aan ku riyoonno da 'u dhigma hamigeenna.
Sannadkii 2020 waxaa yimid naxdintii ugu weyneyd ee hanti-wadaaga wali: COVID-19. Malaayiin qof ayaa ladilay. Laakiin abaabullada bulshada ee iscaawinta iyo wadajirka caafimaad ayaa laga sameeyay goobo fara badan intii uu ku faafay coronavirus-ka cusub. Qaarad ilaa qaarad, dadku waxay ikhtiraaceen oo ay dhexmareen iyagoo adeegsanaya xakamaynta macluumaadka, ku filnaanshaha dowladnimada iyo u diyaargarow la'aanta, isku dayga lagu xakameynayo madax-bannaanida adduunka, iyo sidoo kale yaraanta sahayda ee dhaqaalaha-argagaxa halka suuqa saamiyada uu burburay. Maxaabiista waxaa lagu qasbay inay shaqeeyaan waxyar oo lacag la'aan ah si ay u sameeyaan waji-waji iyo nadiifiyaha gacanta. Isla mar ahaantaana, xabsiyada, jeelasha, xarumaha dadka lagu hayo, iyo xarumaha lagu hayo carruurta ayaa ahaa kiciyayaal cudur iyo dayacaad caafimaad oo baahsan, taas oo sababtay tiro aan la qiyaasi karin oo ah dadka ku jira xabsiyada inay naftooda ku waayaan.
Qaar badan oo ka mid ah jagooyinka Awoodda waxay si isdaba joog ah u qabanayeen howsha matalaadda jagooyinkooda iyo jawaabta Gobolka ee dhibaatada coronavirus. Saaxada siyaasada iyo dhaqanka waxaa hareeyay daawadayaasha ajnabi nacayb, cunsuriyad, iyo karti. Ka mid noqoshada macluumaadka caafimaadka dadweynaha, si tartiib tartiib ah ugu sii kordhaya khadka tooska ah waxay ahayd mid ka hortag ah oo muhiim u ah amniga bulshadayada iyo caafimaadka dadweynaha. In kasta oo dadka ku nool meelaha ugu sarreeya ee dowladda ay hoos u dhigeen dhibaatada ayna iska indhatireen baahiyaha dadka, haddana waa xaaladdan markii ay soo ifbaxeen bilic qurux badan iyo ubax bulsheed oo laga helay gargaar is-dhaafsi ah si loo gaarsiiyo sahayda dadka aan tallaalka qaadin, heer waddooyin laga abaabulo xaafadaha adduunka oo bixiya taageero caafimaad, cunto iyo biyo u qeybinta derisyada nugeylka kala duwan, kheyraadka iyo ururinta macluumaadka iyo kala shaandheynta heerarka tirada badan ee macluumaadka soo galaya maalinba maalinta ka dambeysa si gacan looga geysto taageerada caafimaadka bulshada maadaama aan la kulannay dariiqooyinka cusub iyo kuwa layaabka leh masiibo caalami ah ayaa caqabad ku noqon karta nidaamka, ka tagi doonta masiibo soo socota iyada oo saameyn ku yeelatay bulshooyinka si aan nafteenna iyo midkeenba midka kale u daryeelno. Shabakadaha gargaarka is-kaashatada ayaa sameysmay oo koray si ay nooga dhigaan amaan iyo daryeel waqtiyada halista ah. Erayadii Audre Lorde ayaa naga dhex guuxey, "Marnaba looma jeedin inaan sii noolaano". Markii madaxdu (ama saboolnimadu) dadka ku qasbeen inay shaqo yimaadaan iyagoo jiran, waxay iftiimisay baahida loo qabo isbeddel aasaasi ah oo ku yimaada nidaamkeenna dhaqaale. Talaalka midab kala sooca ayaa banaanka soo dhigay is burinta xasuuqa siyaasada aduunka.
Wadajirka xagjirka ah ee gees kasta oo adduunka ah wuxuu sii wadaa jawaab celin naxariis iyo wargelin leh oo loo yaqaan 'Covid-19' si loo dhiso marin u helka, ilaha, iyo awooda dadka oo dhan meelaha oo dhan. Dadka adduunku waxay ka qaylinayaan meelaha ugu hooseeya ee dhexdooda ah si aan loogu soo laaban "caadi". Neoliberal Capitalism, Dejiye-Gumeysi, iyo Dowladdu waxay ahaayeen oo ay sii wadaan inay nolosha u hanjabaan sidaan ognahay. Waxaan joognaa isgoys: hal wado waa baabi'in, mida kalena waa xorayn. Malik Rahim marwalba wuxuu noo sheegay in jiilkeena loo aqoonsan doono ama inuu noqon doono jiilka ugu weyn ama jiilka ugu habaarka badan ee lunsaday nolosha meerahan sidaan ognahay. Kuwa aan wax ka baran waxyaabihii la soo dhaafay waxaa lagu xukumay inay ku celiyaan, laakiin kuwa abuura mustaqbalka waa kuwa arki kara. Mustaqbalka, halkan laga bilaabo, lama qorin. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad nala qorto.
Waa maxay Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid maxayse qabataa?2019-08-14T21:29:05-04:00
Waa maxay Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid maxayse qabataa?
Gargaarka Musiibada ee Isku-duwda waa isku-xirnaan shaqeysa oo ujeeddadiisu tahay bixinta gargaarka musiibada ee ku saleysan mabaadi'ida midnimada, gargaarka labada dhinac, iyo waxqabadka tooska ah ee madaxbannaan. Annaga oo la shaqeyna, dhageysanna, iyo taageerna bulshooyinka saameynta ku yeeshay, gaar ahaan xubnahooda ugu nugul, si ay u hoggaamiyaan dib u soo kabashadooda, waxaan ku dadaalnaa in aan dhisno beel-waara, waara oo u adkeysta. Gargaarka Musiibo ee Musalafsan wuxuu ka jawaabaa masiibooyinka, wuxuu baraa wax ku saabsan abaabulka bulshada sida u diyaarsanaanta musiibada iyo iskaashiga ka jawaabida xiisadaha xaafadaha, wuxuu aruuriyaa oo faafiyaa casharada laga bartay goobta, wuxuuna taageeraa oo siiyaa xirmooyin isku xirnaan ah oo ka dhex dhaca kooxaha kale ee tabobareyaasha ah ee sameeya shaqada waxqabadka.
Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Dadka waxaa ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaal ku lug yeeshay jawaabo masiibo oo kala duwan, khibrad u leh sameynta shaqo waxbarasho iyo dhisme shabakad, waxayna leeyihiin oo ay sii wadaan inay taageeraan mashaariicdooda ku saleysan iskaashiga wadaagga ah ee bulshada iyo shaqada caddaaladda. Waxaan marag ka nahay oo aan ku dari karnaa dhaqdhaqaaq jawaab-bixiyeyaal ah oo bixiya wax ka beddelista qaab dhismeedka warshadaha ee dowladda iyo kuwa aan faa'iido doonka aheyn, qaab samafal oo ku saleysan samafal, kaas oo ilaaliya heerka ay taagan tahay isla markaana ka faa'iideysata musiibooyinka ay abuurto. Taabadalkeed, Gargaarka Musiibada ee Isku-duuban waa midnimo-ku-saleysan, xiriir ku saleysan, kaqeybgal, oo ku saleysan fahamka shaqada gargaarka musiibada sida shaqada caddaaladda oo hadafkeedu weyn yahay badbaadada, go'aan-qaadashada, iyo xoreynta wadajirka ah.
Gargaarka Musiibada ee Isku-duwda waa isku-xirnaan baahsan, oo lagu qeexay dabeecadda iyo hal-abuurka bulshooyin fara badan oo ay isla soo qaadeen ballan-qaadkeenna wadajirka ah ee aan u taagnaaneyno midnimada dadka ay musiibo ku dhacday ayna u horseeddo mawqifka caddaaladda cimilada. Waa dhaqdhaqaaq, koraya, qandaraas, dabiici ah, milieux firfircoon ee fikir la mid ah laakiin dad kala duwan. Shabakaddeenna ma ahan ciidan taagan oo iskaa wax u qabso ah sida shabakad isku xidha shakhsiyaadka, xiriiryada, iyo xiriirada, qaar horeyba u dhaqmayay, qaar badan ayaa heysta tamarta suurtagalka ah ee ay ku dhaqmaan markii ay musiibo dhacdo. Qulqulka iyo dabeecadda amorphous ee shabakadeena ayaa noo oggolaaneysa inaan la qabsanno waxyaabaha naxdinta leh iyo duruufaha isbeddelaya, oo aan u taageerno duruufaha kaladuwan qaabab gaar ah.
Waxaan fahamsanahay isku xirnaanshaha bulshooyinka kala duwan iyo wax ka barashada maalin kasta inay tahay mid ka mid ah awoodayada ugu waa weyn, iyo shabakado aan tiro lahayn oo aan rasmi ahayn ayaa horay u jiray, iyadoo inbadan la sameynayo maalin kasta. Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid waa uun laan yar oo yar oo ka mid ah hay'addan si dhakhso leh u koraysa, waxayna ka kooban tahay dad ay ka go'an tahay inay taageeraan koritaanka ismaamulka weyn, dhaqdhaqaaqa ka jawaab celinta masiibada ee ku saleysan isku dayga dhiirrigelinta isku xirnaanta badan, dhiirrigelinta kuwa cusub, iyo fududeeyo barashada xirfadaha iyo tabaha muhiimka ah, dhammaantood iyadoo gacan ka geysaneysa ka-badbaadayaasha musiibada fayoobaanta iyo aayo-ka-tashi.
Sidee ayay Gargaarka Musiibooyinka ee Mutual Aid ay ula xiriiraan dadka waaweyn, dhaqdhaqaaqa gargaarka masiibada ee iskood u taagan?2019-08-14T21:28:57-04:00
Sidee ayay Gargaarka Musiibooyinka ee Mutual Aid ay ula xiriiraan dadka waaweyn, dhaqdhaqaaqa gargaarka masiibada ee iskood u taagan?
Gargaarka Musiibooyinka ee Gargaarka Musiibada wuxuu isu arkaa mid mindi ciidan ah oo ku dhex jira sanduuqa weyn ee iswada, dhaqdhaqaaqa ka jawaab celinta masiibada ee labada dhinac. Shabakadayada waxaa kujira mashruucyo badan, ooy kujirto shaqada jawaabta dhulka, iskuxirka iyo dhismaha xiriirka dhamaan dhaqdhaqaaqa, iyo barnaamijyo waxbarasho oo raba ineey koraan adeegsiga kaalmada labada dhinac qaab dhismeedka u diyaarsanaanta musiibada, jawaab celinta, iyo soo kabashada. Laakiin waxaan sidoo kale aqoonsan nahay oo aan ku dadaalnaa sidii aan u taageeri lahayn dadaallada iyo mashaariicda kale ee leh ujeeddooyin la mid ah annaga oo aan aaminsanahay in kaliya dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaq uu inaga caawin karo inaan ka badbaado daawadeyaasha masiibada cimilada ee soo socota.
Waxaan aqoonsan nahay oo u dabaaldegnaa taas dhaqdhaqaaqa noocyo-hoosaadyo, xorriyad, midnimo ku-saleysan, wax ka qabashada masiibada ayaa si weyn uga weyn Gargaarka Musiibada ee Mutual waxayna ka kooban tahay shakhsiyaad badan oo kala duwan, ururinno, ururo, iyo shabakado wata aqoonsi u gaar ah. Qayb ka mid ah himiladeenna waa in aan taageerno shabakadan isku xidhka ah ee dadka u hijrooday in ay wax qabtaan inta lagu jiro musiibo, ayadoon loo eegeynin waxa ay naftooda ugu yeedhaan.
Intaa waxaa sii dheer, uma aragno nafteena sidii ilaaliye ama xarun dhexe oo ka jawaab celinta musiibada. Kooxo kale oo aaminsan mabda 'iyo qaab-dhismeedyo kala duwan ayaa leh oo ay sii wadi doonaan ka jawaabista dhibaatooyinka. Dadka adduunka oo dhami waxay ku hawlan yihiin gargaarka masiibada marka laga eego dhinaca iskaashiga maalin kasta, waxaanan doonaynaa inaan ku dhiirrigelino oo wax ka barano shaqadan muhiimka ah iyo xaqiijinta. Annagu ma dooranin magaca Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid sababtoo ah waxaan dooneynaa inaan iska kaashanno dhaqdhaqaaqyadan, laakiin maxaa yeelay waxaan dooneynaa inaan si joogto ah kor ugu qaadno xeeladdan iyo aragtidan, iyo inaan guri u siino dadka kale ee sidayada oo kale ah, oo macno qoto dheer ka hela jihaynta noloshooda hareeraha u diyaargarowga aafada bulshada iyo ka jawaab celinta dhibaatooyinka DIY.
Waa maxay qaab-dhismeedka Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid Masiibada?2019-08-14T21:30:09-04:00
Waa maxay qaab-dhismeedka Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid Masiibada?
Gargaarka Musiibada ee Masalaha ee Mutual Aid wuxuu hadda ka kooban yahay kooxo badan oo iskood u madax-bannaan oo leh noocyo kala duwan oo shaqo. Jihada iyo nashaadaadka koox kaste oo shaqeynaya inta badan waxaa dejiya kooxda shaqada lafteeda. In kasta oo kooxaha shaqaaluhu leeyihiin heer madaxbannaan oo caddaalad ah oo ay ku fuliyaan wax qabadkooda hoos yimaadda, dhammaantood waxay ku xisaabtamayaan goobaabin ballaadhan. Kooxaha shaqaaluhu waxay mararka qaarkood u soo jeediyaan dalal guud si ay u ansaxiyaan, gaar ahaan markay tahay arin la xiriirta hay'adda oo dhan, sida wax ka badalida siyaasadahayaga gudaha.
Wareegtada guud waxay ka kooban tahay dadka muujiyey oo muujiyey dadaal muddo-dheer mashruuca oo si joogto ah ula kulma si looga caawiyo wadaagga macluumaadka ka dhexeeya kooxaha shaqada iyo go'aanno u baahan qof kasta fikirkiisa. Barnaamijyada, hawlgalka, iyo kooxaha wada abaabulka ee socda ayaa la kulma hadba sida loogu baahdo. Kordhinta, Waxaan isku dayeynaa inaan ku kala-goynno go'aan-qaadashada cabirka 'localest' ee suurtagalka ah, oo macnaheedu yahay go'aanno badan ayaa laga gaadhaa kooxaha shaqada yar, ee kuwa ugu dhaw dhibaatada oo badiyaa saameeya xalka, halkii laga isticmaali lahaa goobada guud. Oggolaanshuhu waa ereyga hawlgalka. Waxaan isku dayeynaa in aannan codeynin, laakiin waxaan gaarnaa natiijo ku qanacsan dhammaan kaqeybgalayaasha. Haddii midna uusan ku qanacsaneyn go'aanka, waxay gartaan oo soo jeediyaan qaabab kale oo cusub. Halkii su’aasha ahayd, “Miyaan ku raacsanahay this“ 100% ”, inta badan su’aasha ayaa ah“ Miyaan ku fiicnaan karaa tan? ”Sidii oo kale muhiim ah, dadaal ayaa sidoo kale la sameeyaa in lala wadaago awoodda go'aan qaadashada kuwa ka badbaaday masiibada markay gabi ahaanba dhacdo. suurtagal.
Qaybta kale ee go'aan ka gaarista masiibada ka dhalanaysa masiibada ayaa ah guddiga hogaaminta, kaas oo fuliya waajibaadkiisa daryeelka iyadoo si dhaw loola socdo howlaha ururka, si joogto ah dib u eegis loogu sameynayo dhaqaalaha iyo arrimaha howlgalada, iyo soo dhexgalka go'aanada la rumeysan yahay inay wax yeeleynayaan, qatar badan, ugu hanjabaadda Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid, ama kasoo horjeedda howlgalka, laakiin haddii kale waxay ka shaqeysaa tandem sidii go'aan-wadaageyaasha. Waxay kale oo ay bixiyaan Gargaarka Musiibada ee Musiibada oo leh sii waditaan hay'ad muddada fog ah iyo joogtayn ah, waxay ka shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa hoggaanka shabakadda qaran, iyo inay si dhow ula shaqeeyaan kooxaha ka shaqeeya gargaarka Musiibada ee Mutual Aid Masiibada si loo hubiyo sii wadidda ololayaasha gargaarka gurmadka Musiibo ee Mutual Aid, baahiyaha, iyo howlaha.
Waxaan sidoo kale si xoogan u dhiirigelineynaa sameynta kooxaha xiriirka iyo, haddii loo baahdo, af hayeenno, si kor loogu qaado is-abaabul iyo madax-bannaani ka dhex aloosan Musiibooyinka Gargaarka Musiibo, gaar ahaan haddii ay dhacdo abaabul ballaaran oo musiibo ah.
Qaabkan wajiyada badan leh wuxuu noo suurta geliyey inaan sii ahaano dareeraha, firfircoon, iyo wax ka qabashada baahiyaha waarayaasha musiibada, iyo inaan isku darno wadashaqeyn, go'aan qaadashada ka qeybqaadashada iyadoo la ixtiraamayo madaxbanaanida.
Sidee bay shaqadu uga jawaab celisaa masiibada Musiibada ee Musiibada Masiibadu ay la xiriirtaa shaqada jawaabta maxalliga ah?2019-08-14T21:30:57-04:00
Sidee bay shaqadu uga jawaab celisaa masiibada Musiibada ee Musiibada Masiibadu ay la xiriirtaa shaqada jawaabta maxalliga ah?
Gargaarka Musiibada ee Isku-darka Dadka wuxuu isku dayaa inuu ka caawiyo kooxaha maxalliga ah falcelintooda ayna ku dhiirrigeliyaan kooxo badan oo xiriir wadaag ah inay ficil yeeshaan, ururo badan oo ay samaystaan, iyo ururo badan oo is-kaashanaya. Ma dooneynno inaan baabi'inno ama aan beddelno muuqaallo iska-wax-u-qabso ah oo ka imanaya caawinaad labada dhinac ah mana beddelno baahida loo qabo kooxaha xaaladda degdegga ah in la sameeyo. Taa bedelkeed, waxaan dooneynaa inaan dhisno xiriirno, aan wax ka barano, oo aan dhageysanno kooxaha maxalliga ah ee howlaheena dhulka ku yaal.
Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Dadka wuxuu ka soo horjeedaa gumeysiga musiibada. Jawaab-bixiyeyaasha ugu horreeya ee dhabta ahi waa dadka sida ugu badan u saameeyeen dhulka, waana ku ixtiraamnaa tan marka la falanqeynayo iyo qaabkeenna. Kooxo kale oo leh aaminaado kala duwan iyo qaab dhismeed ayaa leh hadana sii wadaya wax ka qabashada dhibaatada. Waxaan dooneynaa inaan cadeyno inaan taageerno oo aan dooneynno inaan sare u qaadno kooxaha ka jawaab celinta deg-degga ah ee maxalliga ah, (sida Centros de Apoyo Mutuo, West Street Recovery, iwm,) laakiin runtii kama hadlayno iyaga ama musiibo kale oo madaxbannaan, musiibo madax-bannaan. wax ka qabashada ama dadaallada gargaarka ee labada dhinac ah. Waxaan higsaneynaa inaan ku hadalno oo aan nolosheenna ku noolaano oo aan kor u qaadno codadka kuwa sameynaya shaqo isku mid ah.
Siday Mutual Aid Musiibo Masaafada u taageeri kartaa kooxdeyda gargaarka wadaagga ah ee deegaanka ee ka jawaabaya musiibada ama qabashada shaqada soo kabashada?2019-10-24T13:36:05-04:00
Siday Mutual Aid Musiibo Masaafada u taageeri kartaa kooxdeyda gargaarka wadaagga ah ee deegaanka ee ka jawaabaya musiibada ama qabashada shaqada soo kabashada?
Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid ayaa laga yaabaa inuu ku caawiyo dhowr siyaabood. Waxaan u daabici karnaa liisaska baahiyaha, tabo aruurinta iyo wararka dhagaystayaashayada qaran. Waxaa laga yaabaa inaan kula xiriirno kooxo khibrad u leh abaabulka jawaabcelinta iyo shaqada soo kabashada haddii aad raadineyso talo ama dhiirrigelin, ama aan ku siinno talokan ama latalin nafteena ah. Waxaa suuragal ah inaan kugu toosin karno liiska waxa aad rabto ee Amazon. Waxaan awoodi karnaa inaan tilmaano tabarucayaasha ama bixinno habkaaga. Ahaanshaha shabakad iskaa wax u qabso ah, awooddeena ayaa kala duwan. Laakiin waxaan nahay dabacsanaan iyo firfircooni iyo, sida aan ula dhaqanno waarayaasha musiibada, waxaan mudnaanta siineynaa weydiinta iyo dhageysiga dadaalada wax ka qabashada musiibada. Marka, haddii aad u baahatid baahi ama codsi, xitaa haddii ay ka duwan tahay waxa aad halkan uun ka aqriso, fadlan gaadhsii.
Musiibo ayaa ku dhacday, aniga iyo asxaabteyda waxaan sameyneynaa dadaallo gurmad deg deg ah oo maxalli ah si aan wax uga qabanno. Dadku waa kuwa ka yimid Gargaarka Musiibada ee Labada Dhinac Ma loo heli karaa si ay uga caawiyaan ka hadalka waxyaabaha qaarkood?2019-08-14T21:32:29-04:00
Musiibo ayaa ku dhacday, aniga iyo asxaabteyda waxaan sameyneynaa dadaallo gurmad deg deg ah oo maxalli ah si aan wax uga qabanno. Dadku waa kuwa ka yimid Gargaarka Musiibada ee Labada Dhinac Ma loo heli karaa si ay uga caawiyaan ka hadalka waxyaabaha qaarkood?
Gabi ahaanba! Nagala soo xiriir at [emailka waa la ilaaliyay].
Musiibo aad u fara badan ayaa ka dhacay meelo badan, sidee u go'aansataa goorta iyo meesha laga jawaabayo?2019-08-14T21:33:03-04:00
Musiibo aad u fara badan ayaa ka dhacay meelo badan, sidee u go'aansataa goorta iyo meesha laga jawaabayo?
Inbadan oo ka mid ah shaqada jawaabta musiibada ee ku saleysan cadaalada waxay dhacdaa kahor inta aysan aafadu dhicin iyadoo awooda deegaanka ee uruurinta, isku xidhka, iyo shabakaduhu ay siinayaan nafaqooyin loogu talagalay jawaab celin xoog leh oo ay dadku ku kasbadaan waqtiga qalalaasaha. Qayb ka mid ah howlaheena shabakadeed markaa waa inaan si joogto ah u qoto-dheer una kobciso xiriirkeenna dadka kaladuwan ee waddanka ka hor musiibada. Markay musiibo dhacdo, cilaaqaadyadan ka dhexeeya shabakadeena iyo shabakadaha kale ee deegaanka ee masiibada waxay naga caawinayaan sidii aan u qaabili laheyn qaab taageero leh.
Waxaan nahay shaqaale yar oo isa soo koraya oo iskaa wax u qabso ku shaqeeya oo awood shaqsiyadeed iyo hay'ad ahaanba xaddidan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa naga go'an inaan ku soo darno daryeelka bulshada iyo in aan bogsiino caddaaladda shaqadan, halkii aan sii wadi laheyn aabbenimada aafada. Markaa kama ballan qaadi karno inaan meel walba uga jawaabno, waqti walba. Markaan wax ka qabanno musiibo, waxaan u qabanaa meeshii naloogu martiqaaday iyo goorta aan awood u leenahay sidaa darteed shaqadeenu waxay u sameysmaan si dabiici ah xiriir la leh jawaabta maxalliga ah. Waxaan si joogto ah u kobcineynaa shabakadeena, dhisidda iyo xoojinta xiriirka, annagoo mar walba qiyaasaya waxaan sameyn karno berri. Isla markaana, waxaan sameyneynaa wixii aan kari karno, waxaan ka jawaabnaa markii aan awoodno daacadnimo, ixtiraam, naxariis, iyo daryeel, anagoo ku dheehanna iswadajirka iyo wadajirka. Waxaan rajeyneynaa inaad ku dhiirigelisay inaad sidoo kale sameyso.
Ma haysaa cutubyo maxalli ah?2019-08-14T21:33:42-04:00
Ma haysaa cutubyo maxalli ah?
Gargaarka Musiibada ee Musalafnimada ah hadda ma ahan hay'ad ku saleysan cutub. Waxaan taageersanahay kooxaha isku xirka iyo wada shaqeynta ee sii wada iskood u shaqeynta bulshada ka dhex shaqeeya, isla mar ahaantaasna ay ku xiriiraan wax ka qabashada musiibada markii ay awoodaan ama diyaar u yihiin. Waxaan ku dhiirigelineynaa dadka waaweyni inay la shaqeeyaan dadka kale ee gurigooda ku nool si ay u sameeyaan oo ay u kobciyaan barnaamijyo maxalli ah oo maxalli ah iyo noocyo kaladuwan oo wadaagga ah, oo leh magacyadooda iyo aqoonsigooda. Ka dib markaa, ha ahaato shaqsi ahaan ama ha ahaadee, hoos u dhig cilaaqaadyadaas iyo kheyraadkaas markii ay musiibo ku dhacdo midkood gudaha, gobolka, ama ka sii fog. Dabcan, waxaan had iyo jeer raadineynaa inaan kobcino oo aan soo dhaweyno tabaruceyaal cusub. Fadlan ku soo biir kooxdayada Facebook ama emayl [emailka waa la ilaaliyay] oo noo soo sheeg siyaabaha ugu fiican ee aad jeclaan lahayd inaad u gasho.
Dhammaantiin miyaad leedihiin heerka 501 (c) (3)? Ku-deeqidda ma laga jari karaa cashuur-dhaafka?2019-08-14T21:35:03-04:00
Dhammaantiin miyaad leedihiin heerka 501 (c) (3)? Ku-deeqidda ma laga jari karaa cashuur-dhaafka?
Haa. Gargaarka Musiibada ee Musalafsan waa dhaqdhaqaaq bulsho oo ku saleysan dadaal, iyo himilooyinkeena iyo qulqulka kaqeyb qaadashada, qaab kooxnimo isku xirnaan, abaabul aan ku saleysaneyn heer sare, iyo waxyaabo badan oo annaga naga khuseeya kuma habboona qaab aan faa'iido-doon aheyn waxaanan weli dhaleeceyneynaa. dhismaha warshad aan macaash doon ahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaan door bidnay inaan helno xaalad aan-faa'iido-doon ahayn si aan u caawino albaabada u furan oo aan u siino astaamaha sii-wadista iyo joogtaynta dhaqdhaqaaqa ka-hortagga musiibada iskeed u taagan. Tabarucaadku waa canshuur laga goyn karo, waxaanan ku siin karnaa risiit tabaruc ah markii la codsado.
Caawimaadda Musiibo ee Musalafsan Ma waxay noqon kartaa kafaala-qaade maaliyad kooxdeyda jawaabta?2019-08-14T21:35:35-04:00
Caawimaadda Musiibo ee Musalafsan Ma waxay noqon kartaa kafaala-qaade maaliyad kooxdeyda jawaabta?
Maya waan ka xumahay! Laakiin annagu hadda looma qaban in aannu noqono kafaala-qaade maaliyad u leh hay'adaha kale.
Maxaan filan karaa ilaa iyo inta lajistikada ah haddii aan ku lug lahaa abaabulidda Gurmadka Musiibo ee Musiibada?2019-08-14T21:36:11-04:00
Maxaan filan karaa ilaa iyo inta lajistikada ah haddii aan ku lug lahaa abaabulidda Gurmadka Musiibo ee Musiibada?
Intii lagu guda jiray abaabulida Gargaarka Musiibada ee Dadka, sida caadiga ah, si loo niyad jabiyo dalxiiska musiibada, mutadawiciinta waxaa laga filayaa inay ku maalgeliyaan jidkooda u gaarka ah goobta musiibada. Waxaan fileynaa in tabaruceyaashu ay goobta ku bixi doonaan iyagoo adeegsanaya dhaqaalahooda, markaa kadib waxaan awoodi karnaa inaan ku bixinno magdhawga sahayda aad iibsato ama kharashyada kale ee la midka ah ee la xiriira shaqada. Waxaan rabnaa inay mutadawiciinteena ah dareemaan inay awood leeyihiin si ay wax uga qabtaan baahiyaha deg-degga ah ee waarayaasha musiibada, iyadoo la ogyahay inay Gargaarka Musiibada ee Masalaha gacan ka geysan doonaan. Nagala soo xiriir goobta [emailka waa la ilaaliyay] ama ka hubso isku-duwaha goobta si aad u ogaato haddii aan ku bixin karno lacag celin ka hor intaadan iibsan. Rasiidhada had iyo jeer waa loo baahan yahay. Waxaan hadda ku tiirsannahay tabarucyada yaryar waxaanna leenahay miisaaniyad soo jiidasho leh sidaas darteedna maalgelinno gaar loo leeyahay oo loogu talagalay shaqsiyaadka 'dadaalka gurmadka samafalka' ayaa lagu dhiirrigelinayaa.
Waxaan kugula talineynaa inaad qorsheyso inaad gasho xaalad kasta oo musiibo ah intii aad ugu filan kartid. Tabarucayaal badan oo nala shaqeeyey waxay leeyihiin gawaadhi u gaar ah oo laba jibaar meel ay ku seexdaan. Badanaa waxaan la shaqeynaa kaniisadaha maxalliga ah, masaajidda, iyo xarumaha kale ee bulshada si aan u helno guryo aasaasi ah oo iskaa wax u qabso ah. Waqtiyada kale, xero ama kursi sariirta ayaa ah ikhtiyaarka kaliya. Waxaan guud ahaan cunnaa waxa aan bulshada la wadaagno. Haddii aad leedahay cunto gaar ah ama baahiyo kale, dabcan waxaan isku dayi doonnaa inaan dejinno, laakiin waxaan kugula talineynaa inaad keento waxaad u baahan tahay.
Waxaan la kulannaa mararka qaar qaab rasmi ah, mararka qaarkoodna si aan rasmi ahayn maalin kasta si aan uga wada hadalno baahiyada degdegga ah iyo siyaabaha aan u dabooli karno baahiyahaas. Waa wax iska caadi ah in la xanuujiyo marka ugu horeysa. Laakiin waxaan rabnaa inaan noqonno bulsho soo dhaweyn leh, waxaanan kugu caawin doonaa hanuunin.
Ma kaqeyb qaadan karaa Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid?2019-08-14T21:36:58-04:00
Ma kaqeyb qaadan karaa Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid?
Xaqiiqdii! Haddii aad la jaanqaaddo qiimayaasha aasaasiga ah iyo mabaadi'da hagitaanka, waan kugu soo dhaweyneynaa inaad nagu soo biirto. Waxaan qabnaa shaqo badan oo aan qabanno marwalbana waxaan rabnaa dad badan oo ku soo biiriya mashruucyadeena jira isla markaana aan qorsheyneyno kuwa cusub. Nagala soo xiriir at [emailka waa la ilaaliyay] si aad noogu soo sheegto habka ugu fiican ee aad wax ku xirmi karto.